Daaweynta cudurada dhirta | January 2020
Ugu Weyn Ee Daaweynta cudurada dhirta
Sida loo daryeelo gloxinia guriga: cayayaanka iyo daaweynta cudurrada
Gloxinia waa warshad tuberous leh ubaxyo jilicsan oo jilicsan, caleemaha lafdhabarta ah iyo astaam yar oo gaaban, taas oo xubin ka ah qoyska Gesneriyev. В естественной среде его можно встретить во влажных тропических лесах Перу и Бразилии.Gloxinia waa mid aan qabin, laakiin si ay u koraan oo u koraan sida caadiga ah ee guriga, korriinku waa inuu sameeyaa dadaal xoogaa ah.
Liiska buuxa ee fungicides dhirta
Fungicides waa walxo qayb ahaan u xakameynaya ama burburinaya jirooyinka dhirta kala duwan. Waxaa jira dhowr kala-soocid noocyada cayayaanka noocan ah, iyadoo ku xiran ficilka, astaamaha kiimikada, iyo habka codsiga. Next, waxaan bixinnaa liiska dhamaystiran ee fungicides, soo bandhigay foomka liiska naqshadaha ugu caansan dhirta leh magacyada iyo sharaxaad iyaga.
Fungicide "Ordan": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Daroogada "Ordan" waxay ku talinayaan inay ilaaliyaan canabka, basasha, yaanyada, qajaarka, baradhada iyo habeenkii kale ee cudurada fangas. Qalab badan ayaa keena xayawaan udubdhexaad u ah maaddooyinka firfircoon ee aan la qabsan karin dabaylo goor dambe, alteranriosis, iyo peronospora. Waa tayadaas oo kala saaraysa fungicide "Ordan", taas oo aan ku jirin maadooyin loo yaqaan 'fungi'.
"Tamarta Tamarta": sharaxaad, halabuurka, codsiga
Beeraley kasta oo si dhakhso ah ama gaaban leh waa inuu ku guuleystaa geedaha iyo xoortay ka soo cayayaanka aan la isku halayn karin oo ka daweyn cudurada. Mid waliba wuxuu leeyahay hababkiisa u gaarka ah ee iyaga loola dhaqmo, khibrad la caddeeyey. Waxaa jira daroogo badan suuqa oo ujeeddooyinkan, hadda waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah tan loo yaqaan "Previkur Energy.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daaweynta cudurada dhirta 2020